Tantaran’ny mpinamana mamahana sakafo maraina mpianatra zazavavy 500 isan’andro ao Yemen mba hahafahan’ireo mianatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 16:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, русский, Deutsch, 日本語, Ελληνικά, Swahili, 繁體中文, عربي, Português, বাংলা, Nederlands, Română , Esperanto , Español
Noho ny tsy fahampian'ny fitaovana nateraky ny ady ao Yemen, mihamitombo ny isan'ny fianakaviana voatery manajanona ny zanany tsy ho alefa any an-tsekoly. Matetika ny zazavavy no alefa manambady na dia mbola tanora 13 taona aza. Na izany aza, nahita endrika fanavotana kely fa mahomby ny sekoly iray ao Sana'a renivohitra.
Nanomboka nanome sakafo maraina ho an'ny mpianatra zazavavy, anelanelan'ny enina ka hatramin'ny 16 taona, ao amin'ity sekoly ity ny FTMF Solidarios sin Fronteras (miorina ao Espaina sy Yemen) izay saika ampandehanin'ny mpanolotena manontolo ary vatsian'ny tolotra ataon'ny tsirairay — ny sasany kely dia kely tokoa fa misy iray euro isam-bolana—. Talohan'ny tetikasa dia tsy tonga nianatra ny ampahadimin'izy ireo. Niverina tsikelikely ny mpianatra ary hatramin'ny septambra 2018, tonga isan'andro any am-pianarana avokoa ny mpianatra miisa 525 ao aminy, hoy ny mpanorina ny Solidarios.
Nifampiresaka tamin'ny roa tamin'ny mpanorina ny FTMF tamin'ny alalan'ny Whatsapp aho, dia i Eva, izay efa nihaona tamiko mivantana taona vitsivitsy lasa izay tany Barcelona, sy i Faten, izay any Yemen. Niresaka tamiko ny fomba nahaterahan'ny tetikasa “Sakafo maraina hanabeazana sy hiarovana” ry zareo. Niangavy ahy ihany koa ry zareo tsy hampiseho manontolo ny anarany feno na ny anaran'ny sekoly noho ny antony ara-piarovana.
Tamin'ny Marsa 2018, nambaran'ny Firenena Mikambana ho iharan'ny krizy mahaolona ratsy indrindra eto ambonin'ny tany ny ao Yemen. Satria miakatra avo dia avo ny tsi-fisian'asa sy ny fiakarambidim-piainana, 80 isanjaton'ny fianakaviana ao amin'ny firenena no mitrosa ary 65 isanjato no mitrongy vao homana.
Vakio ihany koa: Ny ady sy ny fitantanana ratsy ary ny fiovaovan'ny toetr'andro ao Yemen no mahatonga ny tsy fahampian-drano [mg]
Marina ihany koa ity fomba fihevitry ny ataovinao-ihany ity amin'ny programa telo karakarain'ny fikambanana. Amin'ny “Fanampiana ara-tsakafo ho an'ny fianakaviana,” ry zareo mizara fonosan'entana ho an'ny fianakaviana marefo ao an-tanànan'i Sanaa, Aden, Amran, Raydah, Hodeidah, Al Dorihimi ary ireo fianakaviana nafindra toerana ao Taiz. “Rano ho an'i Yemen” mikarakara ny fitehirizan-drano ao amin'ny tobin'ny olona nafindra toerana anatiny ao Amran sy Raydah ary ny “Manorina indray an'i Socotra” manolotra simenitra hananganan-trano sy ihadiana fatsakana ao amin'ny nosy Socotra noravain'ny rivodoza tamin'ny taona 2015.
Ekipa volontera sady boto no mpanaramaso izy telo mirahavavy ireto ary manantena ny fanohanan'ireo volontera azo itokisana hafa eo amin'ny firenena roa tonta. Eva sy Noèlia, izay samy monina ao Espaina no miandraikitra ny fanohanana ara-bola ataon'ny hafa: miankina amin'ny media sosialy, ny radio, ny fampitam-baovao an-tsoratra printy ary ireo famakianteny (fampianarana ambony) ry zareo amin'ny fampielezana ny teny momba ny asan-dry zareo sy hanintonana ny mpandray anjara. Manolo-bola an-tserasera ny ankamaroan'ny olona ary manampy ny tetikasa tsirairay ao anatin'nyfanavahana azy ireo. Faten no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny bemidina eny an-kianja — izay matetika miainga avy ao an-tranony ihany. Izy telo mirahavavy no mandrafitra ny ekipam-pitantanana fototra ary mifampitady hatramin'ny amin'ny fotoana hanatontosana ny raharahany ao amin'ny FTMF mifanila amin'ny asa aman-draharaha ataony isan'andro.
Mizara ara-potoana ny saripika, lahatsary, ary ny fanavaozam-baovao amin'ny antsipirihany ry zareo ao amin'ny pejy media sosialy isaky ny tetikasa tsirairay tanterahin-dry zareo. Mampiely votoaty ihany koa ry zareo hanaovana fanairana momba ny ady ao Yemen, indrindra fa ny anjara toeran'i Espaina asy ireo firenen-kafa amin'ny fampitaovana ara-piadiana ampiasaina mandritra ny ady.